SKYPE ကိုအပေါ်အမှား: ဝင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် DATA ကိုအမှားမဖြစ်နိုင်ပါ - SKYPE ကို - 2019
သငျသညျ Skype ကို login ဝင်ဖို့ကြိုးစားလျှင်သင်အောက်ပါအမှားနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြသည်: "ဒေတာအမှားကြောင့် Logon ပျက်ကွက်" မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကျနော်တို့အခု fix ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်အတွက်စဉ်းစားပါ။
ဤအလုပ်ရပ်များထွက်တင်ဆောင်လာသော, သင်အခွင့်အရေးများရှိသည်ဖို့လိုအပ် "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး"။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသွား "အုပ်ချုပ်ရေး-Computer ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု-ဒေသခံသုံးစွဲသူများနှင့်အဖွဲ့များ"။ ဖိုင်တွဲကျနော်တို့ရှာတွေ့ "အသုံးပြုသူများ"လယ်ပြင်ပေါ်နှစ်ကြိမ်ကလစ်နှိပ်ပါ "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး"။ တစ်ဦးအပိုဆောင်း window တွင်အပိုင်းကနေကို tick ကိုဖယ်ရှား "အကောင့်ကိုပိတ်ထား".
အခုဆိုရင်လုံးဝ Skype ကိုပိတ်ပါ။ ဒါကမှတဆင့်အကောင်းဆုံးပြု "Task Manager ကို" tab ကို "လုပ်ငန်းစဉ်"။ ကျွန်တော်ရှာတွေ့ « Skype.exe » ထိုသို့ရပ်တန့်။
ယခုငါတို့သွားပါ "ရှာရန်" နှင့်မိတ်ဆက်ပေး «% Appdata% Skype ကို»။ သင့်ကိုယ်ပိုင်တွင်တွေ့ဖိုင်တွဲကိုအမည်ပြောင်း။
တနည်းကား, တံခါးအထဲသို့ဝင် "ရှာရန်" နှင့် "ရေးရန်»% Temp% skype။ ဤတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦး folder ကိုစိတ်ဝင်စား « DbTemp »ဒါကြောင့်ဖယ်ရှားပါ။
Skype ကိုသွားပါ။ အဆိုပါပြဿနာပျောက်ကွယ်သွားသင့်ပါတယ်။ အဆက်အသွယ်ရှိနေဆဲပါလိမ့်မယ်သတိပြုပါနှင့်ဖုန်းခေါ်ခြင်းနှင့်စာပေးစာယူ၏သမိုင်းသိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်ပါပေးပါ။
မဆိုဖယ်ရှား tool ကို run လိုက်ပါ။ ဥပမာအား Revo Uninstaller for ။ ကျနော်တို့ Skype ကိုရှာပြီးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထိုအခါရှာဖွေရေးအတွက်ရိုက်ထည့် «% Appdata% Skype ကို» နှင့် Skype ကို folder ကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။
ဒီပြီးနောက်, ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါနှင့်နောက်တဖန် Skype ကို install လုပ်ပါ။
Skype ကို disabled ရမည်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေနေကလေးစစ်သားတ «% Appdata% Skype ကို»။ အဆိုပါဖိုင်တွဲကိုတွေ့ « Skype ကို» သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူ၏အမည်နှင့်အတူ folder ကိုရှာပါ။ ငါက «တိုက်ရိုက် # 3aigor.dzian » ထိုသို့ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်တော် Skype ကိုသွားပါ။
သငျသညျရှာတွေ့ Ckaype disable အကယ်. «% appdata% skype »ရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအတူဖိုလ်ဒါကိုသွားပြီးကြောင့်အမည်ပြောင်းဥပမာ «တိုက်ရိုက် # 3aigor.dzian_old »။ ယခုငါတို့သင့်အကောင့်သို့ logging, Skype ကို run ခြင်းနှင့် Task Manager ကိုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန့်။
တနည်းကား, သွားပါ "ရှာရန်" နှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လုပ်ပါ။ သွားပါ «တိုက်ရိုက် # 3aigor.dzian_old » အဲဒီမှာဖိုင်ကို copy « Main.db »။ ဖိုင်တွဲတစ်ခုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောကြောင့် «တိုက်ရိုက် # 3aigor.dzian »။ ကျနော်တို့ကိုအစားထိုးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသဘောတူသည်။
ပထမတစ်ချက်မှာအရာအားလုံးကိုအလွန် slozhno.Na အမှန်တကယ်အချိန်ကငါ့ကို option တခုစီပေါ်မှာ 10 မိနစ်ကိုယူသည်။ မှန်ကန်စွာပြုသောအမှုရှိလျှင်, ထိုပြဿနာကိုပျောက်ကွယ်သွားသင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: How to Disable Windows 8 login password!! & Windows One Free Simple Step (အောက်တိုဘာလ 2019).